Booliska Canada oo baaraya Soomaali la dhaawacay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Booliska Canada oo baaraya Soomaali la dhaawacay
Booliska Canada oo baaraya Soomaali la dhaawacay
Dhibaatooyinka heysta dhalinyarada ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa waxa ay noqdeen kuwo sii kordhay, sida ay sheegeen masuuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi.
Koox hubeysan ayaa laba maalmood kahor waxa ay magaalada Toronto ku dhaawaceen wiil iyo gabar Soomaali ah, laamaha ammaanka oo falkaasi ka jawaabaya ayaa xiray wiil kale oo Soomaali ah, kaasi oo lagu tuhunsan yahay inuu wax ka ogyahay arrimahan.
Booliska magaalada Toronto ayaa waxa ay sheegeen in ay ku daba jiraan raggii falkan ka dambeeyay, dhawaana ay soo bandhigi doonaan warbixin sax ah oo la xiriirta sida uu falkan u dhacay iyo cida ka dambeysa.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Canada ayaa in muddo ah waxa ay wadaan dadaalo lagu baajinayo dilalka dhalinyarada, balse dadaalada ay wadaan ayaa u muuqda kuwa aanan weli laga gaarin wax guul ah.
Somali Canadian Forum oo ay ku mideysan yihiin Odayaasha magaalada oo kaashanaya culimada Masaajida ayaa maalmo kahor waxa ay qabteen barnaamij looga hadlayay wax ka qabashada dhibaatooyinka loo geysto dhalinyarada Soomaaliyeed.